घरमा विवाह सजावट - रमाईलो गर्न उत्तम विचारहरू बेजिया
सुसाना Godoy | 22/07/2021 14:00 | अद्यावधिक गरियो 22/07/2021 14:02 | सजावट
के तपाई विवाह गर्दै हुनुहुन्छ तर अधिक घनिष्ठ तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसैले तपाईं एक बनाउन सक्नुहुन्छ घर विवाह सजावट जुन उत्तम विचारहरू मध्ये एक हुन निश्चित छ। किनकि यो तपाईंको वातावरण हो, तपाईं आफ्नो उत्तम विचारहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ र साथै धेरै पैसा बचत गर्नुहोस्, जुन सँधै राम्रो समाचार हो।
तर किनभने यो सस्तो छ, यो अधिक बोरिंग हुनुपर्दैन, यो टाढाबाट। साथै घरमा तपाईले शर्त पनि लगाउन सक्नुहुन्छ सपना विवाह, तपाईंले भर्खर केही रचनात्मक विचारहरूमा शर्त राख्नु पर्छ। तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँको दिनलाई तपाइँको सम्पूर्ण जीवनको सब भन्दा खास बनाउने छ, जस्तो कि यो हुनुपर्दछ।
1 घर विवाह सजावट फूल व्यवस्था
2 कुर्सी र तिनीहरूको सजावट
3 फोटोहरु लाई नबिर्सनुहोस्!
4 एउटा काठको पट्टी
5 सब भन्दा प्राकृतिक र देहात शैली मा शर्त
6 लाइटबल्ब स्ट्रिप्स तपाईंको ठूलो क्षण रोशन गर्न को लागी
घर विवाह सजावट फूल व्यवस्था
एक शक बिना, फूलहरूको प्रबन्धहरू सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विवरणहरू हुन् हामी हाम्रो विवाह को सजावट छ। त्यसोभए, प्रयास गर्नुहोस् कि बगैंचाको प्रवेशद्वार वा ठाउँ जहाँ समारोह हुने छ, दुबै छेउमा फूलहरू राख्ने व्यवस्था छ, टेबलमा र तपाईं भित्ता क्षेत्रहरू पनि सजावट गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, सधैं तपाईंलाई मनपर्ने रंग र फूलहरू मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्। पेस्टल टोनहरू यी सबैका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ, किनकि तिनीहरू वातावरण रिचार्ज गर्दैनन्।
कुर्सी र तिनीहरूको सजावट
समारोह को क्षण को लागी, ती कुनै एक सुन्दर सजावट को साथ उनीहरु संग को लागी जस्तै प्रत्येक को लागी। तपाइँ तपाइँलाई आफ्नो विवाह समारोह को समय को लागी कपडाले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईं कुर्सीहरू बिना तर विवरण सहित कुर्सीहरू राख्नमा पनि शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ। मेरो मतलब, तपाई सक्नुहुन्छ फोटो वा बेलुनको साथ सजावट, भोज कुर्सिहरु जस्तै। हो, दुलहा र दुलही को कुर्सिहरु अक्षर संग ब्यक्तिगत गर्न सकिन्छ। के यो राम्रो विचार होईन?
फोटोहरु लाई नबिर्सनुहोस्!
फोटोहरू सँधै सुशोभित हुन्छ र हामीलाई अमिट सम्झनाको नजिक ल्याउँदछ। तपाइँ तपाइँको पाहुनाहरूको छेउमा, प्रत्येक टेबलको बीचमा एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग अद्वितीय स्मृति छ भने, यो टेबुलमा फूलहरूको छेउमा राख्न उत्तम हुन्छ। निश्चित रूपमा जब तिनीहरू आउँछन् र बस्छन्, तिनीहरू खुशीसाथ मुस्कुराउनेछन्। यदि त्यहाँ रूखहरू छन् भने, तब तपाईं यसको वरिपरि पातलो डोरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको छनौटको छविहरू ह्या hang्ग गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा काठको पट्टी
काठले हामी जे चाहन्छौं गर्न सक्छौं। किनकि यो सी को बारे मा छबारलाई प्राथमिकता दिँदै जहाँ पाहुनाहरूले आफूलाई मनपर्दो पेयहरू आफैंमा पुर्‍याउँछन्। तपाईले टेबुलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एउटै फिनिशको पनि क्यानापस वा डेजर्ट बारको साथ। तिनीहरू विचारहरू हुन् जसले सजावट भित्र पनि आउँछ किनभने प्रत्येक अतिथिले अधिक मौलिक वातावरणको आनन्द लिने छ जस्तो कि पहिले कहिल्यै भएको थिएन र त्यस कुनामा आफुलाई मनपर्दो सेवा दिनको लागि सक्षम हुनुभयो। घर विवाहमा, हामी एक क्याटरि service सेवा भाँडामा लिन सक्छौं वा नि: शुल्क बुफे शैली राख्न सक्छौं।
सब भन्दा प्राकृतिक र देहात शैली मा शर्त
यदि तपाइँसँग तपाइँको विवाहलाई कसरी सजावट दिन चाहानुहुन्छ भन्ने धारणा पहिले नै छ तर तपाइँसँग शैलीको अभाव छ भने हामी तपाइँलाई बताउँदछौँ कि देहाती फिनिश पहिलो इनाम लिने एक हो। यो यसको स्वाभाविकताको कारण हो र किनभने यसको यो छ प्रकृति को तत्व जस्तै क्षेत्र फूल, खैरो को छाया, डोरी र फीता पनि जुन विन्टेज टचको साथ आउँदछ जुन हामीलाई धेरै मनपर्दछ। तसर्थ, बेज वा बालुवा रंग र सेतो रंग यस प्रकारको अवसरको लागि सँधै छनौट गरिन्छ। हामीले माथि उल्लेख गरेझैं तपाईले केकमा सँधै शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ किनकि उनीहरू अझ बढी रोमान्टिक वातावरण सिर्जना गर्न जोड्दछन्, जुन हामीलाई वास्तवमै चाहिन्छ।
लाइटबल्ब स्ट्रिप्स तपाईंको ठूलो क्षण रोशन गर्न को लागी
ठूला बत्तीहरूका बारे तपाईले सोच्नु पर्दैन, किनकि बल्बको साथ तपाईसँग पहिले नै पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ। त्यस्तै केही स्ट्रिपहरूको साथ तपाईं दिदै हुनुहुन्छ रचनात्मकता र प्राकृतिकताको एक स्पर्श तपाईंको वातावरणमा। हो, यो सत्य हो कि तपाई बगैंचा वरिपरि एउटा क्षेत्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन कि प्रकाश पनि प्रदान गर्दछ। तपाईं यी विचारहरूको के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » घर विवाह सजावट